Akụkọ - Obodo dị iche iche bịanyere aka na ụlọ ọrụ RCEP webatara ọnọdụ ọhụrụ nke azụmaahịa
Na Nọvemba 15, 2020, nnukwu ozi bịara wee bụrụ ihe nlebara anya nke mba niile n'ụwa. Mgbe afọ asatọ nke mkparịta ụka gasịrị, ndị isi nke mba 15, gụnyere China, Japan na Singapore, bịanyere aka na nkwekọrịta RCEP site na ogbako vidiyo.
A mụtara na RCEP na-ezo aka n'ozuzu mmekọrịta mmekọrịta mmekọrịta mpaghara, yana ndị otu ya gụnyere Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Singapore, Brunei, Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, China, Japan, Republic of Korea, Australia na New Zealand. Nkwekorita ahụ na-ekpuchi mkpochapụ nke mgbochi azụmaahịa dị n'ime, imepụta na mmelite nke ebe itinye ego n'efu, mgbasawanye nke azụmahịa na ọrụ, nchebe nke ikike ikike ọgụgụ isi, amụma asọmpi na mpaghara ndị ọzọ.
Dika nkwekorita di n'etiti obodo iri na ise ga - achota uzo nke uzo abuo a na - acho ahia maka ahia ahia, mgbe nkwekorita ahu malitere na mpaghara karia 90% nke ahia na ngwongwo ga - emecha nweta onu ahia efu. ụtụ isi na efu na obere ụtụ na efu maka afọ 10, a na-atụ anya ime mpaghara mpaghara azụmahịa n'efu RCEP n'oge dị mkpirikpi ngwa ahịa nnwere onwe azụmaahịa niile.
Mịnịstrị na-ahụ maka ego kwuru na ịdebanye aha ọma nke RCEP na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ịkwalite mgbake akụ na ụba na-akpata ọrịa na ịkwalite ọganihu na ogologo oge nke mba niile. Mgbasawanye nke ịtọhapụ ahịa ga-eweta nkwalite dị ukwuu na akụ na ụba mpaghara na ọganihu azụmahịa. Uru dị mma nke nkwekọrịta ahụ ga-abara ndị na-azụ ahịa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe uru, ọ ga-arụ ọrụ dị mkpa n'ịbawanye nhọrọ na ahịa ndị na-azụ ahịa na mbenata ọnụ ahịa azụmahịa maka ụlọ ọrụ.
Ntinye aka nke nkwekọrịta ọ bụla ga-emecha laghachi na mmepe akụ na ụba na uru maka ndị mmadụ. Maka ụlọ ọrụ na ngwa ngwa China, mbinye aka nke RCEP ga-akwalite "ịpụ" na "iwebata" ụlọ ọrụ China na ngwa ọrụ, na-emepe ọnọdụ ọhụụ nke azụmahịa.
Dịka ụzọ na akụrụngwa a na-ejikarị eme ihe na ụlọ ọrụ, ọrụ ugbo, nyocha sayensị na mpaghara ndị ọzọ maka mmesho, nchịkọta, nyocha na njikwa, akụrụngwa na ngwaahịa mita na-ekpuchi ihe niile gbasara ọrụ mmadụ. Mgbe ọtụtụ iri afọ nke mmepe, China si ngwá na ngwá ụlọ ọrụ kpụrụ a dịtụ zuru ezu ngwaahịa Atiya, na a ụfọdụ mmepụta ọnụ ọgụgụ na mmepe ike nke ulo oru usoro, uto bụ nnọọ ngwa ngwa, ụfọdụ ngwaahịa izute anụ ụlọ ahịa ina, kamakwa a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke mbupụ na ahịa esenidụt.
Ọ bụ eziokwu na ụtụ tarifu anyị etinyela nrụgide nke ọtụtụ ndị na-ebupụ ahịa ebe ọ bụ na agha azụmaahịa 2018 malitere, mana n'ime afọ gara aga, ọtụtụ na-achọsi ike ịgbanwe ahịa ha iji belata mmetụta nke ụtụ isi anyị.
Oge a, uru kasịnụ nke itinye aka na RCEP bụ mbenata ụtụ isi azụmaahịa n'etiti mba ndị otu MVE, na-eme ka ụlọ ọrụ dị mfe itinye ego na mbupụ ngwa ahịa na ọrụ na mba ofesi. Maka ụlọ ọrụ ndị na-etinye aka na ngwa ahịa na mbupụ ahịa nke mita, ọ bara uru ịbawanye mbupụ ngwaahịa, bulie ego ụlọ ọrụ, melite asọmpi ngwaahịa ma gbasaa ahịa mba ofesi.
Tụkwasị na nke a, n'ihi mbelata ọnụahịa, ngwa ọrụ na ngwaahịa mita na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke mmekorita mba na imekọ ihe ọnụ na ọnụ ọnụ, n'otu oge ahụ, ahịa mba na nke ụlọ nwere ike ịdị mfe mgbanwe nke ngwa ahịa achọrọ, na-enyere ụlọ ọrụ ụlọ aka ibubata Ngwa na ngwa ngwaahịa iji gboo mkpa a.
Oge a, mba iri na ise abanyela RCEP. Na ụdị ntinye ọnụahịa nke mba ọ bụla, akụrụngwa na ngwaahịa ndị metụtara gụnyere gụnyere ntụgharị ihu, ndị nyocha dị iche iche na ngwa ndị ọzọ na ngwaọrụ eji elele ma ọ bụ nyocha eletrik. Ule na igwe maka akụrụngwa, ike, compressibility, elasticity or other mechanical properties; Ngwá na ngwaọrụ gbasara nyocha nke anụ ahụ na kemịkalụ (dịka, chromatograph gas, chromatograph mmiri, spectrometer).
A na-ahụ anya na site na mmejuputa iwu nke mbido, usoro omenala, nyocha na iche, ụkpụrụ teknụzụ na iwu ndị ọzọ, mkpochapụ tarifu na mgbochi na-abụghị tarifu ga-eji nwayọ hapụ nsonaazụ azụmaahịa nke RCEP. Dị ka onye na-arụ ọrụ nke abụọ na mita na-arụ ọrụ n'ụwa, asọmpi nke ngwa ngwa China na ngwaahịa ga-abawanye, na-erite uru karịa ụlọ ọrụ na ndị na-azụ ahịa.
6 Waya Stepper Motor, Servo Motor Actuator, Ngwakọ Stepper Motor, Emechiela Loop Stepper Motor Driver, 220 Volt Ọrụ Servo Motor, Ọrụ Stepper Motor,